अकुत सम्पत्ति मुद्दामा डा. श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी ठहर | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
अकुत सम्पत्ति मुद्दामा डा. श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी ठहर
काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । विशेष अदालतले भरतपुरस्थित वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन अध्यक्ष डा. भक्तमान श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।
अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, सदस्यद्वय रत्नबहादुर बागचन्द र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले श्रेष्ठलाई अकुत सम्पत्ति मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । इजलासले श्रेष्ठलाई एक वर्ष कैद र एक करोड १८ लाख ६६ हजार ५७६ रुपियाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ । आदेश अनुसार श्रेष्ठको जरिवाना बमोजिमको बिगो समेत जफत हुनेछ ।
विशेष अदालतका रजिस्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठले भक्तमानको मुद्दा आंशिक ठहर भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अख्तियारले गरेको मागदाबीमध्ये एक करोड १८ लाख ६६ हजार ५७६ रुपियाँ स्रोत नखुलेको इजलासले ठहर गरेको छ । उहाँलाई एक वर्ष कैद सजायको फैसला भएको छ ।’
डा. श्रेष्ठले विशेषको फैसलामा चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनु हुनेछ । फैसला बुझेको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिसक्नु पर्नेछ । अदालतले अकुत सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गरेको आरोप लगाइ प्रतिवादी बनाइनु भएकी डा. श्रेष्ठकी श्रीमती शिलु श्रेष्ठलाई भने सफाइ दिएको छ ।
पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७२ फागुन २ गते श्रेष्ठविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गैरकानुनी रुपबाट सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले एक करोड ६७ लाख ५७ हजार ११३ रुपियाँ गैरकानुनी रुपमा श्रेष्ठले आर्जन गरेको आरोप लगाएको थियो । अख्तियारले बिगोदावी बमोजिमको जरिवाना पनि माग गरेको थियो तर अदालतले दाबी मध्ये एक करोड १८ लाख ६६ हजार रुपियाँको मात्र स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै दाबीको आंशिक ठहर गरेको थियो । क्यान्सर अस्पतालका विशेषज्ञ डा. श्रेष्ठ २०५४ सालमा सेवा प्रवेश गरी सोही अस्पतालमा १८ वर्ष बिताउनु भएको थियो । २०६४ सालमा उहाँ अस्पतालको प्रमुखमा नियुक्त हुनु भएको थियो ।
आइओएम कर्मचारीलाई २९ लाख जरिवाना
यस्तै विशेष अदालतले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी मुख्य कार्यालय सहायक उर्मिलाकुमारी लामालाई पनि राजस्व हिनामिनामा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू द्वारिकामान जोशी, चण्डिराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले लामा दोषी ठहर गरेको हो ।
विदेशी विद्यार्थीले जम्मा गरेको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरी राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा लामाविरुद्ध अख्तियारले २०७२ भदौ २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले १४ लाख ७० हजार ७७१ रुपियाँ राजस्व व्यक्तिगत खातामा लामाले जम्मा गरेको आरोप लगाएको थियो ।
अदालतले लामासँग बिगो बमोजिमको जरिवानासहित २९ लाख ४१ हजार ५८३ रुपियाँ भराउन आदेश दिएको छ । इजलासले लामालाई दुई वर्ष ६ महिना कैदको सजाय समेत सुनाएको छ ।
- नारायण काफ्ले , गोरखापत्र दैनिकबाट
10/31/2018 12:11:00 PM